Mas'uul ka tirsan xisbiga UCID oo lagu dilay magaalada Laascaanood. - Jowhar somali news leader
Marxuumka oo dhowr xabadood qeybaha sare ee jirka looga dhuftay u geeriyooday ayaa kamid ahaa waxgaradka & siyaasiyiinka ugu miisaanka culus ee Gobolka Sool, kaasoo inta badan u hadli jiray shacabka reer Laascaanood.
Sheekh Aadan Madoobe oo maamul goboleedyada kala hadlay…
Saraakiil loo xiray weerarkii Gaalkacyo ee wasiirka Arrimaha…
Wali faah faahin buuxa lagama bixin sababta loo dilay iyo cida dishay, balse waxaa socda baaritaano ay wadaan laamaha amniga oo ay doonayaan iney ku soo qabtaan kooxihii falkaasi dilka ah ka danbeeyay.
Dilka mas’uulkan ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa ku soo beegmayo xili Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba ay ka taagan tahay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumada Muuse Biixi ee ka dhashay cabsida laga qbao daaha doorashada, iyadoo hoggaanka xisbiyada ay isku dayo dil ah oo fashilmay ku eedeeyeen nidaamka madaxweyne Biixi.
Master 763 posts
Sheekh Aadan Madoobe oo maamul goboleedyada kala hadlay sharci dejinta .
Saraakiil loo xiray weerarkii Gaalkacyo ee wasiirka Arrimaha dibadda iyo Nabadoon…